नेपाल र भारतबीच विश्वासको सम्बन्ध बनाउनुपर्छ: डा. शंकर शर्मा (भिडियो सहित) - Nepal’s First News Agency
नेपाल र भारतबीच विश्वासको सम्बन्ध बनाउनुपर्छ: डा. शंकर शर्मा (भिडियो सहित)
काठमाडौं, मंसिर २० गते । भारतका लागि प्रस्तावित राजदुत डा. शंकर शर्माले नेपाल र भारतका विचमा विश्वासको सम्बन्ध बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आपसमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा सुधारका लागि दुई देशविच विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । आपसी विश्वास कायम गर्न सकेमा धेरै कामहरु गर्न सकिने प्रस्तावित राजदुत शर्माले बताउनुभयो । नेपालको आवश्यकता र राष्ट्रिय हितको विषयलाई रणनीतिक रुपमा अगाडी लिएर जानुपर्ने आवश्यकता पनि उहाँले औँल्याउनु भयो । प्रस्तावित राजदुत शर्माले भन्नुभयो, ‘दुई देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने विषयमा एउटा विश्वासकै आवश्यकता छ । सबभन्दा ठूलो विश्वास हो । विश्वासलाई विकास गर्न सके धेरै कामहरु सजिलैसँग अगाडी जानसक्छ । विश्वासको वातावरण बढाउँदै जाने, अगाडी लिएर जाने कुराहरु हुन्छ । हाम्रो आवश्यकता र राष्ट्रिय हितमा हुनसक्ने कुराहरुलाई रणनीतिक रुपमा लिएर जानसक्ने सम्भावना रहन्छ । यी कुराहरु सम्बन्ध सुधार गर्नलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन् सुरुवातका लागि भन्ने मलाई लाग्छ । भारतसँगको सम्बन्धमा हाम्रो प्राथमिकता लगायत, अल्पकालिन, दिर्घकालिन रुपमा गर्नुपर्ने कुराहरु र आधारका कुराहरु कसरी अगाडी लिएर जानसक्छौँ भन्ने कुरामा अभ्यास गर्न सकियो भने राम्रो होला, त्यसमा पनि प्रयास गर्छु ।’